Cha Eun Woo ကို ဘယ်မင်းသမီးနဲ့တွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ချင်လဲမေးကြည့်တဲ့အခါ… – Trend.com.mm
Posted on December 4, 2018 December 4, 2018 by Noel
ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်နေ့တုန်းက MBC ရဲ့ “Section TV” အစီအစဉ်မှာ ASTRO အဖွဲ့ဝင် Cha Eun Woo ကို ဧည့်သည်အနေနဲ့ မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူနောက်ထပ်လုပ်ချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲပုံစံတွေ၊အတူတွဲရိုက်ချင်တဲ့မင်းသမီးတွေကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်တဲ့။
Cha Eun Woo ဟာ မင်းသမီး Im Soo Hyang နဲ့ “My ID Is Gangnam Beauty” မှာအတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရင်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြားမှာပိုပြီးရေပန်းစားခဲ့တဲ့ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို နောက်ထပ်ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းပုံစံမျိုးသရုပ်ဆောင်ချင်လဲမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ သူက နန်းတွင်းဇာတ်လမ်း ဒါမှမဟုတ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကားမျိုးရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ထပ်ပြီး Girl’s Day အဖွဲ့ဝင်Hyeri နဲ့ Suzy ဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ချင်လဲရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ Cha Eun Woo က Suzy ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီး Kim Yoo Jung နဲ့Park Bo Young နှစ်ယောက်ထဲမှာတော့ Park Bo Young နဲ့တွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်တဲ့။
နောက်ဆုံးသူ့ကို Suzy နဲ့ Park Bo Young ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲမေးကြည့်တော့ Cha Eun Woo က Suzy ကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းက Cha Eun Woo ဟာ မင်းသမီး Shin Min Ah က သူသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးပုံစံလို့ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ အင်တာဗျူးမေးသူက Shin Min Ah နဲ့Suzy ဆုိုရင်ရော ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲမေးခဲ့ပါတယ်။Cha Eun Woo တစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြေခဲ့လဲ?
Cha Eun Woo က “ကျွန်တော်ပထမတုန်းက နန်းတွင်းဇာတ်လမ်းနဲ့ကျောင်းသားဇာတ်လမ်းပုံစံနှစ်မျိုးရွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ Shin Min Ah နဲ့ ကျွန်တော်နန်းတွင်းဇာတ်လမ်းရိုက်ချင်ပြီး Suzy နဲ့ ကျောင်းသားဇာတ်လမ်းရိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်က လောဘကြီးတယ်ဗျ”လို့ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ Cha Eun Woo က သူ့ရဲ့ ASTRO အဖွဲ့ဝင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဂီတအလုပ်တွေလုပ်ရင်းအလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။မကြာခင်မှာလည်း’Show!Music Core’ အစီအစဉ်အတွက် Guest MC အဖြစ် ၂ပတ်တာပြန်ပြီးလုပ်ပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။Cha Eun Woo ဟာ ၂၀၁၆ ကစလို့ တစ်နှစ်နဲ့ ငါးလနီးပါးကြာတဲ့အထိ ဒီ “Show! Music Core” အစီအစဉ်ရဲ့ MC အဖြစ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်လေး မကြာခင်ထွက်လာဖို့လည်း ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
ဒီဇငျဘာ ၃ရကျနတေု့နျးက MBC ရဲ့ “Section TV” အစီအစဉျမှာ ASTRO အဖှဲ့ဝငျ Cha Eun Woo ကို ဧညျ့သညျအနနေဲ့ မေးမွနျးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။အဲ့ဒီမှာသူနောကျထပျလုပျခငျြတဲ့ဇာတျလမျးတှဲပုံစံတှေ၊အတူတှဲရိုကျခငျြတဲ့မငျးသမီးတှကေိုလညျး ပွောပွခဲ့ပါတယျတဲ့။
Cha Eun Woo ဟာ မငျးသမီး Im Soo Hyang နဲ့ “My ID Is Gangnam Beauty” မှာအတူတှဲဖကျသရုပျဆောငျရငျး မိနျးကလေးပရိသတျတှကွေားမှာပိုပွီးရပေနျးစားခဲ့တဲ့ အဆိုတျောသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။သူ့ကို နောကျထပျဘယျလိုဇာတျလမျးပုံစံမြိုးသရုပျဆောငျခငျြလဲမေးမွနျးကွညျ့တဲ့အခါမှာ သူက နနျးတှငျးဇာတျလမျး ဒါမှမဟုတျ တက်ကသိုလျကြောငျးသားကားမြိုးရိုကျခငျြတယျလို့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ထပျပွီး Girl’s Day အဖှဲ့ဝငျHyeri နဲ့ Suzy ဘယျသူနဲ့တှဲပွီးသရုပျဆောငျခငျြလဲရှေးခယျြခိုငျးတဲ့အခါမှာ Cha Eun Woo က Suzy ကိုရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။မငျးသမီး Kim Yoo Jung နဲ့Park Bo Young နှဈယောကျထဲမှာတော့ Park Bo Young နဲ့တှဲပွီးသရုပျဆောငျခငျြပါတယျတဲ့။
နောကျဆုံးသူ့ကို Suzy နဲ့ Park Bo Young ဘယျသူ့ကိုရှေးမလဲမေးကွညျ့တော့ Cha Eun Woo က Suzy ကိုပဲရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။အရငျတုနျးက Cha Eun Woo ဟာ မငျးသမီး Shin Min Ah က သူသဘောကတြဲ့မိနျးကလေးပုံစံလို့ပွောပွခဲ့ဖူးပါတယျ။အဲ့ဒီမှာ အငျတာဗြူးမေးသူက Shin Min Ah နဲ့Suzy ဆုိုရငျရော ဘယျသူ့ကိုရှေးမလဲမေးခဲ့ပါတယျ။Cha Eun Woo တဈယောကျဘယျလိုဖွခေဲ့လဲ?
Cha Eun Woo က “ကြှနျတျောပထမတုနျးက နနျးတှငျးဇာတျလမျးနဲ့ကြောငျးသားဇာတျလမျးပုံစံနှဈမြိုးရှေးခဲ့ပါတယျ။ဒီတော့ Shin Min Ah နဲ့ ကြှနျတျောနနျးတှငျးဇာတျလမျးရိုကျခငျြပွီး Suzy နဲ့ ကြောငျးသားဇာတျလမျးရိုကျခငျြပါတယျ။ကြှနျတျောက လောဘကွီးတယျဗြ”လို့ဖွခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုလကျရှိမှာတော့ Cha Eun Woo က သူ့ရဲ့ ASTRO အဖှဲ့ဝငျသူငယျခငျြးတှနေဲ့ပဲ ဂီတအလုပျတှလေုပျရငျးအလုပျရှုပျနပေါတယျ။မကွာခငျမှာလညျး’Show!Music Core’ အစီအစဉျအတှကျ Guest MC အဖွဈ ၂ပတျတာပွနျပွီးလုပျပေးရမယျလို့သိရပါတယျ။Cha Eun Woo ဟာ ၂၀၁၆ ကစလို့ တဈနှဈနဲ့ ငါးလနီးပါးကွာတဲ့အထိ ဒီ “Show! Music Core” အစီအစဉျရဲ့ MC အဖွဈလုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။သူ့ရဲ့ဇာတျလမျးတှဲသဈလေး မကွာခငျထှကျလာဖို့လညျး ပရိသတျတှကေ မြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။
မကြာမီ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Happy Death Day 2U အတွက် ရင်ခုန်နေကြပြီလား ?